လာရောက်အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ- အားလုံးပဲ လာရောက်တဲ့အတွက် စိတ်ရောကိုယ်ပါရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ----
၀န်ခံပါရစေခင်ဗျာ- ကျွန်တော် လေ့လာပြီးလုပ်ကြည့်နေဆဲပါခင်ဗျာ -ကောင်းကောင်းလုပ်တတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ
ဒါကြောင့် ခွင့်လွှင့်သည်းခံပေးကြစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ-ကျွန်တော့်ဝါသနာကြောင့်တာလုပ်ဖြစ်သွားတာပါ-သင်ဆရာ၊မြင်ဆရာ၊ကြားဆရာအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် ဘာမှ မတတ်တဲ့အတွက် များသောအားဖြင့် တတ်သော အစ်ကို၊ အစ်မ များ ရေးထားသော Blog Link များကို ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးပဲနားလည်ခွင့်ပြုပေးပါရန် ----
ကျွန်တော်ကတော့ Networking & Hardware ၀ါသနာပါတော့ အဓိကထားပြီး တင်ပေးသွားပါ့မယ်။ ကျွန်တော် တွေ့သမျှ အစ်ကို၊ အစ်မ များဆီမှလင့်များနှင့် တွေ့ကြုံသမျှကို သီးသန့်လေ့လာနိုင်စေရန်ပေါ့။ ကျွန်တော် လင့်ပေးတဲ့ အစ်ကို၊ အစ်မ များကလည်းခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်---အားလုံးပဲ တိုးတက်ကြပါစေ---
ဖတ်ရန်။ ကျွန်တော် ပေးထားတဲ့ Website Links တွေမှာ ကြည့်လို့မရသည်များရှိနိုင်ပါသည်။ Website များလဲထပ်ခါပါနိုင်ပါသည်။ ကြိုတင်တောင်းပန်ပါသည် ခင်ဗျာ။ ဖွင့်မရသည်ရှိသော် Proxy နဲ့အဆင်မပြေရင် ဒါလေး Download လုပ်ပြီးလုပ်ကြည့်ပါ။
ဒါကတော့ Linux Commands လင့်လေးပါ။
ဒါကတော့ Networking ဘာသာပြန်စာအုပ်လင့်လေးပါ။
ဒါကတော့ Windows Server 2003 ဘာသာပြန်စာအုပ်လင့်ပါ။
ဒါကတော့ Computer Hardware စာအုပ်လင့်ပါ။
အော် ပြောရအုံးမယ်--- သီချင်းကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်က သီးသန့်ရယ်လို့မထည့်တော့ဘူးဗျ။ ဓါတ်ပုံဆိုတဲ့ Tag မှာက အိပ်မက်လှိုင်းရေဒီယို ၊ မြန်မာဝက်ဆိုဒ်များ Tag မှာက DJ သံဇဉ် ၊ ဇာတိ Tag မှာက တရားတော်FM နည်းပညာ Tag MHM Club လေ ၂၄-နာရီနော်--ဟဲဟဲ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ-----
ဒါကတော့ NetGuide Pdf စာအုပ်လေးပါ။
When the water got up to their neck, Socrates dipped him into the water. The young man struggled to get out but Socrates was strong and kept him underwater until he started turning blue.
The young man struggled hard and finally managed to get out and the first thing he did was to takeadeep breath.
Socrates asked," What did you want the most when you were underwater?" The young man replied, "Air."
Socrates said, " That's the most secret to success. When you want success as badly as you wanted air, you will get it. There is no other secret."
refer: Teacher Willian Khan
ပျော်ရွှင်စရာ Google Homepage ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့လုပ်ကြည့်ကြရအောင်လား
၁။ http://www.funnylogo.info/extrathemes.asp ဒါကတမျိုးလေးဗျ။
၂။ http://googlemyway.com ကြိုက်တာနဲလုပ်ပါ။
၁။ http://googlemyway.com ကို address bar (URL)မှာရိုက်လိုက်ပါ။ပြီးရင် Enter ။
၂။ Design your Own Google Make it Box မှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့စာသားကိုရိုက်ပါ။
၃။ This is the URL for your Own Google MyWay Page မှာပေါ်လာတဲ့ URL ကိုမှတ်ထားပြီး ရင်ရပါပြီ။HomePage မှာပေါ်နေစေချင်ရင်တော့ Tools > Options > Homepage မှာ ကိုယ်ရဲ့ Googlemyway URL ကို ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ။
http://minnayla.blogspot.com/ လေ့လာဖို့အရမ်းကောင်းတဲ့ ကျွန်တော့်အစ်ကို ၀က်ဆိုဒ်လေးပါ။
This might be the same IP address: www.tvphp.net
This is your IP address: 74.55.233.74
tvphp.net isadomain name.
When you addressaweb site, like http://www.tvphp.net, the name is translated toanumber byaDomain Name Server (DNS).
Your Internet address "74.55.233.74" isapart of the standard TCP/IP protocol (and so is your domain name).
Are you Network and Hardware hobby?
Network& Hardware ကိုဝါသနာပါသလား
လုံးဝ ၀ါသနာ အရမ်းပါတယ်။
A Yin Lo Par Pal ( Lay Phyu's New Song) - Watch more funny videos here